पूर्व नगरपार्षद पक्राउ, राजनाथ सिंहको अपीललाई सकारात्मक मान्नुपर्छ – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsपूर्व नगरपार्षद पक्राउ, राजनाथ सिंहको अपीललाई सकारात्मक मान्नुपर्छ
पूर्व नगरपार्षद पक्राउ, राजनाथ सिंहको अपीललाई सकारात्मक मान्नुपर्छ
August 16, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, खबर, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलिङ पुलिसले हिजो स्वतन्त्रता दिवसको राती दार्जीलिङको वार्उ नम्बर 22-का पूर्व नगरपार्षद ज्ञाने सिंहलाई पनि पक्राउ गर्यो। यसैको विरोधमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकहरुले केही समय दार्जीलिङ सदर थाना पनि घेराउ गरे। यहाँको रेलवे स्टेशनबाट शुरू भएको जुलूस सदर थानामा आएपछि केही समय विक्षोभ प्रदर्शनमा परिणत भएको थियो, जुन जुलूस चौकबजार पुगेर एक जनसभामा परिणत भयो।
यसै जनसभालाई सम्बोधन गर्दै क्रामाकपा (क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी) नेता सुनिल राईले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागमा सड़कमा आइरहेका जनतालाई सलाम गर्दै जनता यसरीनै अथक बनेर अघि आउनुपर्ने आह्वान गरे। उनले केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले जीएमसीसी (गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटी)-का प्रतिनिधिहरुलाई राज्य सरकारसित वार्ता गर्ने दिएको अपीललाई सकारात्मक मान्दै भने-जीएमसीसीले राज्य सरकारसित एकमात्र गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनबारे वार्ता गर्नेछ, तर यसलाई राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले कदापि स्वीकार गर्ने छैनन्। यसैले राज्य सरकारसित हुने बैठक विफल बनेपछि आगामी दिनमा गोर्खाल्यान्ड मुद्दा लिएर केन्द्र सरकारलेनै हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ। यसैले केन्द्रिय गृहमन्त्रीको अपील वा आदेशलाई जनताले नकारात्मक ढङ्गमा लिनु हुँदैन। किनभने, आन्दोलनकारहरुको राज्य सरकारसित हुने बैठक विफल बनेपछि राज्य सरकारले गोर्खा जातिको सर्वांगीण विकास गर्न अहिलेसम्म के गरेको छ? गोर्खा जातिलाई बंगालमा कसरी राखिएको छ? यसबारे पनि केन्द्र सरकारले आगामी दिनमा राज्य सरकारलाई सोध्नसक्छ। यसैले गोर्खाल्यान्डको यस आन्दोलनमा जनता थाक्नु हुँदैन, जनता थाके-नेता थाक्नेछन् अनि नेता थाके-गोर्खाल्यान्डनै थाक्नेछ। तर गोर्खा जाति कहिले थाक्दैन, यो सत्य हो।
उनले राज्य सरकारमाथि कटाक्ष प्रहार गर्दै अझै अघि भने-दार्जीलिङ पहाड़को झार-जङ्गल फाँड़ेर गोर्खा जातिले चियाबगान बसाए अनि शहरको स्थापना गरे। तर यी चियाबगानका श्रमिकहरुलाई राज्य सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउन कस्तो पदक्षेप ग्रहण गरिएको छ? राज्य सरकारले चियाबगानका श्रमिकहरुदेखि आम जनतालाई कुनै सुविधा प्रदान गरेको छैन, यसैले गोर्खा जातिलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आवश्यकता परेको हो। यद्यपि, उनले गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको लागि समय भने अवश्यै लाग्ने बताउँदै यसको लागि जनताले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने पनि अपील गरे। उनले भने-हामीले कसैको किपट मागेका होइनौं, संविधानको आधारमानै देशभित्रै अलग राज्यको माग गरिएको हो।
एसएसबीको कब्जामा स्कूलः पातलेबासबाट भागे विमल गुरूङ